ADDY ကိုအသုံးပြုပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်စာသားတွေ၊ Sticker တွေဓာတ်ပုံမှာထည့်နိုင်ပြီ! – AsiaApps
February 1, 2018 WilliamReviewsNo Comment on ADDY ကိုအသုံးပြုပြီးမိမိစိတ်ကြိုက်စာသားတွေ၊ Sticker တွေဓာတ်ပုံမှာထည့်နိုင်ပြီ!
မိမိရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြလိုတဲ့အချိန်တွေ၊ ဓာတ်ပုံကိုပိုမိုလှပအောင်ဖန်တီးချင်တဲ့ လူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး Application တစ်ခုပါ။ သာမာန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာမက Social Network က Blogger တွေအနေနဲ့လည်း မိမိရဲ့ ရေးသားချက်တွေကိုဖတ်ရှု့သူပိုမိုများလာအောင် ပုံအလန်းလေးတွေဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံနဲ့ ပါဝင်တဲ့ Option လေးတွေကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ရအောင်…
Application ကိုသွင်းပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ မိတ်ဆွေဖုန်းမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအကုန်တက်လာမှာပါ။ အဲ့ဒီပုံတွေထဲကစိတ်ကြိုက်တစ်ပုံကိုရွေးပြီး “Next” နှိပ်ပြီးရင်တော့ စတင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါပြီ။ Stickers, Text, Effects နဲ့ Pro ဆိုပြီး Option ၄ ခုပါဝင်ပါတယ်။
Sticker မှာတော့ Fun, Love, Pets, Music အစရှိတာတွေအပြင်ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီမှာသက်ဆိုင်ရာ Sticker ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ Text ကတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဓာတ်ပုံတွေကို စာထည့်နိုင်တဲ့ Option ပါ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာထည့်မယ့် စာသားရဲ့ အရွယ်အစား၊ အမျိုးအစား၊ အရောင် နဲ့ အလင်းအမှောင် တွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ချိန်ဆနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကစာသားအမျိုးအစားတွေပါ ပါဝင်တာကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှပါတယ်။
Effect မှာတော့ Filter နဲ့ Overlay နှစ်မျိုးသာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ပြုပြင်ပြီးသာပုံတွေပြထားမှာဖြစ်ပြီး အရောင်အနိမ့်အမြင့်ကိုတော့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Pro ကတော့ ပိုက်ဆံပေးရမယ့် Option ပါ။ Pro ကိုဝယ်လိုက်ရင်တော့ ကြေညာမပါ၊ Sticker တွေထပ်မံတိုး၊ ဓာတ်ပုံတွေကို Watermark မပါပဲ Share နိုင်၊ အစရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၃ ရက် အခမဲ့အသုံးပြုပြီးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အပတ်စဉ်ကြေး $7.99 (သို့) လစဉ်ကြေး $9.99 နဲ့ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
IOS platform တစ်မျိုးတည်းမှာသာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေဖန်တီးရတာဝါသနာပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမက Blogger လေးတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိစေနိုင်တဲ့ App လေးဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Download link – ADDY – add text to photos